लिपस्टिक कसरी लगाउने ? – Rajdhani Daily
लिपस्टिक कसरी लगाउने ?
ओठको सुन्दरताका लागि लिपस्टिक उपयुक्त माध्यम हो । ओठलाई सुन्दर बनाउन लिपस्टिकका मुख्य भूमिका हुने गर्दछ । लिपस्टिकले ओठलाई हँसिलो, रसिलो, आकर्षक, ग्लामर बनाउँछ । तर, ओठअनुसारको सही आकारमा लिपस्टिक लगाउन सकिएन भने लिपस्टिकको प्रयोग उपयुक्त देखिँदैन । हाम्रा ओठ विभिन्न आकारका हुन्छन् । ठूला र राम्रा भनिएका ओठमा पुरै ओठलाई लिपस्टिकले पोत्दा अझ भद्दा देखिन्छ । त्यस्तै, पातलो तथा सिरुपाते भनिएको ओठमा ओठको आकारमा मात्र लिपस्टिक लगाउँदा यस्तो ओठ पातलो भएकै कारण लिपस्टिकले आकर्षक नदेखिन सक्छ । त्यसैले, हामीले लिपस्टिक प्रयोग गर्नुअघि आफ्नो ओठ कस्तो अथवा कुन आकारको हो, त्यो बुझ्न जरुरी छ । आफ्नो आकारको ओठलाई बढाएर ठूलो अथवा सानो बनाउन सोहीअनुसारको आउटलाइनर ओठमा कोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सुन्दर ओठ बनाउनका लागि लिपस्टिकको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेबारे यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
आकारको हिसाबले ओठको प्रकार
१. तलमाथिकै पातलो ओठ
२. तलमाथिकै मझौलो ओठ
३. तलमाथिकै मोटो ओठ
४. तलको पातलो र माथिको मोटो ओठ
५. तलको मोटो र माथिको पातलो ओठ
ओठअनुसार लिपस्टिक प्रयोग
१. तलमाथिकै पातलो ओठ : यस्तो ओठ सानो देखिने भएकाले यसलाई लिपस्टिकको माध्यमबाट ठूलो देखाउन सकिन्छ । त्यसैले, तलमाथिको पातलो ओठमा लिप लाइनर (पेन्सिल) सहायताले ओठबाहिर आउटलाइन कोर्ने । सो आउटलाइनभित्र लिपस्टिकलाई लगाउने । यसो गर्दा ओठ अलिक ठूलो देखिन जान्छ ।
२. तलमाथिकै मझौला ओठ : यस्तो ओठ आफैंमा सही आकारको ओठ हो । त्यसैले, ओठ आकारको आउटलाइन लिप लाइनर (पेन्सिल) को सहायताले कोर्ने । सो आउटलाइनरभित्र लिपस्टिक लगाएपछि ओठ आकर्षक देखिन्छ ।
३. तलमाथिकै मोटो ओठ : मोटो ओठ अलिक भद्दा देखिन्छ । त्यसैले, निकै मोटो ओठलाई केही सानो बनाएर लिपस्टिक लगाउने पर्ने हुन्छ । मोटो ओठमा लिपस्टिक लगाउनु अघि लिप लाइनर (पेन्सिल) को सहायताले ठूलो आकारको ओठको केही भित्री भागबाट आउटलाइनर कोर्ने । सो आउटलाइनरभित्र लिपस्टिक लगाउने । यसो गर्दा ठूलो एवं भद्दा ओठ पनि ठिक्कको र आकर्षक देखिन्छ ।
४. तलको पातलो र माथिको मोटो ओठ : यस्तो प्रकारको ओठ छ भने तलको ओठलाई माथिको जत्तिकै बराबरको बनाउनुपर्छ । जसका लागि तलको ओठमा माथिको ओठको आकारको आउटलाइनर लिप लाइनर (पेन्सिल) को सहायताले कोर्ने । माथि यदि अलिक बढी नै मोटो छ भने त्यसलाई ओठको अलिक भित्रका लिप लाइनर (पेन्सिल) को सहायताले आउट लाइनर कोर्ने । अब तल र माथिको ओठमा कोरेको आउटलाइनरभित्र लिपस्टिक लगाउने । यसो गर्दा दुवै ओठ बराबर भई सुन्दर र आकर्षक देखिन्छ ।
५. तलको मोटो माथि पातलो ओठ : यस्तो प्रकारको ओठ छ भने माथिको ओठलाई तलको जत्तिकै बराबरको बनाउनुपर्छ । जसका लागि माथिको ओठमा लिप लाइनर (पेन्सिल) का सहायताले तलको ओठको आकारको आउटलाइनर कोर्ने । तल यदि अलिक बढी नै मोटो छ भने त्यसलाई ओठको अलिक भित्रका लिप लाइनर (पेन्सिल) को सहायताले आउट लाइनर कोर्ने । अब माथि र तलको ओठमा कोरेको आउटलाइनरभित्र लिपस्टिक लगाउने । यसो गर्दा दुवै ओठ बराबर भई सुन्दर र आकर्षक देखिन्छ ।
सानो तर उदाहरणीय अभियान
१५ प्रतिशत नाफामा